Oppo Reno 2 asambodo Bluetooth na-ekpughe ụfọdụ nkọwa ya Gam akporosis
Oppo Reno 2 asambodo Bluetooth na-ekpughe ụfọdụ nkọwa ya
Bọchị mmalite nke atọ ụdị Oppo Reno 2 nke a ga-enye n'ahịa. Echi ha ga-eme ọfụma dịka ọnụ ga-ekwe nkwaỌfọn, n'izu ndị a, anyị amatala ọtụtụ ihe banyere mobiles ndị a, ma ọ bụ ụdị dị iche iche, karịa, n'ihi ụdị niile anyị enwebeghị ike ikpughe ihe ha debeere anyị.
Iji nwetakwuo ikpughe ma ọ bụ gosipụta ihe Oppo Reno 2 Central ga-enye anyị, asambodo Bluetooth agbaala. N'ime ndepụta ya ị nwere ike ịhụ ụfọdụ nkọwapụta nke teknụzụ nke ngwaọrụ a, anyị ga-ekwukwa banyere nke a n'okpuru.
Oppo smartphone nwere nọmba ihe atụ 'CPH1907'. Agbanyeghị na enweghị nkwenye na ọ bụ njedebe nke usoro Reno 2, ekwenyere na ọ bụ ọdịiche mba ofesi nke otu n'ime mobiles ndị a. O nwetala nkwado site na nnabata Bluetooth SIG, nke e gosipụtara ụfọdụ isi nkọwa ya.
Dika ihe ndi otu nhazi kpughere na nchekwa data ha, smartphone na-akwado Bluetooth 5.0 na dual-band Wi-Fi. Ọ na-e kwuru na Snapdragon SM7150, nke bụ esịtidem aha nke Ihe nhazi Snapdragon 730G ma nke ahụ nwere igwefoto selfie 16 megapixel, yana ntọala igwefoto quad nke gụnyere ihe mmetụta 48 MP, oghere 8 MP, ihe mmetụta 13 MP na oghere 2 MP. Ihe nkọwa ndị a kwekọrọ na nkọwapụta Reno 2 nke pụtara na akụkọ ndị na-adịbeghị anya. Ya mere, enwere ike ikwu na CPH1907 nwere ike ịbụ nsụgharị mba nke smartphone a.
Dị ka a pụrụ ịhụ na video anyị kpọgidere ebe a, ezinụlọ a nke mobiles ga-elekwasị anya nke ukwuu na ngalaba foto, na ọbụna karịa na vidiyo vidiyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo Reno 2 asambodo Bluetooth na-ekpughe ụfọdụ nkọwa ya
Huawei Nova 5T: Ekwentị ọhụrụ na mpaghara Nova
Samsung Galaxy J5 (2017) na-enweta mmelite gam akporo na Samsung One UI